အိမ်လို့တောင် ခေါ်လို့မရတဲ့ နေရာလေးမှာ နေကြရတဲ့ မောင်နှမ (၄) ယောက် - Update News
အိမ်လို့တောင် ခေါ်လို့မရတဲ့ နေရာလေးမှာ နေကြရတဲ့ မောင်နှမ (၄) ယောက်
December 3, 2020 December 3, 2020 - by Best_admin
ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကလေးကျေးရွာ နတ်ကုန်းဘက်မှာတဲ့သူတို့လေးတွေတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ပေးချင်မိတယ် မိမိတို့အိမ်မှာ ပိုနေတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေကအစပေါ့…လှူချင်တဲ့သူများရှိရင်ရင် လှူပေးကြပါလားလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်
အရင်လိုပရဟိတမလုပ်နိုင်တော့ပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ကူညီချင်မိလို့ပါ… ကရင်ပြည်နယ်မြိုင်ကလေးကျေးရွာနတ်ကုန်းကပါပေးဆပ်သူအဖွဲ့က ကိုလပြည့်(09796640893)သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည် တတ်နိုင်သလောက်လေးတွေ ကူညီပေးလို့ရပါတယ်
ကလေးတွေရဲ့ နေရေးထိုင်ရေးနဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေတတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးလို့ရပါတယ် ကလေးတွေက အဖေပဲရှိပါတော့တယ်…အမေကတော့ ဆုံးပါးသွားပါပြီ
နိုင်သည်ဝန်ဖြင့်ကူညီလှူဒါန်းပေးကျပါရှင့်…ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုပါက ပေးဆပ်သူ သွေးတာဝန်ခံ ကိုလပြည့် 09. 796640893
ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ကေလးေက်း႐ြာ နတ္ကုန္းဘက္မွာတဲ့သူတို႔ေလးေတြတြက္ လိုအပ္တာေလးေတြ ေပးခ်င္မိတယ္မိမိတို႔အိမ္မွာ ပိုေနတဲ့အဝတ္အစားေလးေတြကအစေပါ့…လႉခ်င္တဲ့သူမ်ားရွိရင္ရင္ လႉေပးၾကပါလားလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္
အရင္လိုပရဟိတမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေပမဲ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ကူညီခ်င္မိလို႔ပါ… ကရင္ျပည္နယ္ၿမိဳင္ကေလးေက်း႐ြာနတ္ကုန္းကပါေပးဆပ္သူအဖြဲ႕က ကိုလျပည့္(09796640893)သို႔ဆက္သြယ္လႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလးေတြ ကူညီေပးလို႔ရပါတယ္
ကေလးေတြရဲ႕ ေနေရးထိုင္ေရးနဲ႔ အဝတ္အစားေလးေတြတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးလို႔ရပါတယ္ ကေလးေတြက အေဖပဲရွိပါေတာ့တယ္…အေမကေတာ့ ဆုံးပါးသြားပါၿပီ
ႏိုင္သည္ဝန္ျဖင့္ကူညီလႉဒါန္းေပးက်ပါရွင့္…ဆက္သြယ္လႉဒါန္းလိုပါက ေပးဆပ္သူ ေသြးတာဝန္ခံ ကိုလျပည့္ 09. 796640893
ချင်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွင် သေဆုံးသောစစ်​ကောင်စီဘက်မှ အလောင်း ၁၀ လောင်းအားဖြစ်သလိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့
Previous Article ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာချွတ်အိပ်သင့်သလား ?
Next Article မိသားစုဝင်များအားလုံး ကိုဗစ်နဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့လို့ တစ်ဦးထဲကျန်ခဲ့ရှာသူ ဖွားဖွားရဲ့အဖြစ်
တစ်မိနစ် ၁သိန်းခွဲနဲ့ ရည်းစားစကားလာပြောလို့ရပါပြီဆိုတဲ့ မအေးသောင်း
စစ်အာဏာရှင်များရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း စစ်ရေးနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာပါတော့မယ့် စစ်ကောင်စီ
နိုင်ငံကျော် သုံးယောက် အတူတူရိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ကြော်ငြာလေး
ပိုက်ဆံအတွက်မဟုတ်ပဲ အချစ်အတွက် အသက် 80 အဘွားကို လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
အသက် (၇၀) ကျော် အမေကြီး ကိုဘေးမှာ ထားပီး ကောင်လေး နဲ့ မဖွယ်မရာလုပ်နေတဲ့အိမ်ဖော်
အာဇာနည်​နေ့အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်အာဇာနည်ဗိမ္မာန်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စိုးဝင်းတို့ တက်​ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိ
တောက ဒေါက်တာရမ်းကုနှင့် မြို့ကြီးသူ မမနဲ့တွေကြလေသောအခါ
းပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညကြောင့် နောက်နေ့ နေ့လည်ထိ အပြင်ကိုမထွက်နိုင်တော့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့အဖြစ်
ငြိမ်းမြတ်သူက ဆုရတာမဟုတ်ပါဘူး၊ Presenter က မှားပြီး ကြေညာမိတာပါတဲ့
ဇနီးက ကလေးမွေးဖွားပြီးခါစ အဲလိုတော့မလုပ်သင့် ပါဘူး
သောက်တလွဲလူသားပေါက်စီ မြေအောက်လှိုင်ဂူကိစ္စ နဲ့ အောက်တန်းကျသောစိတ်ဓါတ်များ